စွန်အကြောင်း - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> တံခှနျ
ဆောင်းပါးများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ လင့်များနှင့်အရင်းအမြစ်များမတူညီသောစွန်အမျိုးအစားများနှင့် ၄ င်းတို့အသုံးပြုခြင်း။
တည်ငြိမ်သော ac္atic atic atic atic atic ac k k k k စသည်တို့သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်
၎င်းတို့၏မူလအစသည်မသေချာသော်လည်းနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်သောဒဏ္legာရီများစွာရှိသည် - လေဖြင့်သယ်ဆောင်လာသည့်လယ်သမားတစ် ဦး ၏ ၀ ါးထုပ်၊ သင်္ဘောရွက်သို့မဟုတ်သုံးရက်ကြာပျံသန်းသောငှက်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်စွန်ကိုတီထွင်ခဲ့သောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်မိုတီ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သည်။ ငှက်လိုပဲ
အမှန်တရားကတော့ပျံသန်းတဲ့စွန်ကတရုတ်တွေကိုတရားအားထုတ်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤအပန်းဖြေမှုသို့မဟုတ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုများအပြင်, စွန်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်လီနီးရှားတွင်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည် ငါးကိုလှည့်ဖြားရန်လှေအားဖြင့်ချပစ်အရိပ်ကနေလုံလောက်သောအကွာအဝေးမှာ device ကို။
တရုတ်တို့သည်စစ်မြေပြင်တွင်အချက်ပြခြင်းမှသည်စစ်မြေပြင်အသုံးချမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဝိုင်းရံထားသည့်စခန်းသို့အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာနိုင်ခဲ့သည်။ အချို့ရာဇ ၀ င်များတွင်ပင်ထိုအရာဝတ္ထုများ၌ဝိုင်းထားသည့်မြို့များပေါ်တွင်ပျံသန်းနေသောအမျိုးသားများရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
စွန်သည်တရုတ်နိုင်ငံမှ၎င်း၏ area ဇာလွှမ်းမိုးမှုthroughoutရိယာတစ်လျှောက်တွင်ရှိသည် ထို့ကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ကိုရီးယား၊ မလေးကျွန်းစု၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်မြန်မာ၊ ဂျပန်နှင့်အိန္ဒိယတို့တွင်တွေ့ရသည်။ ဤတိုးချဲ့မှုကိုအဘယ်အချိန်၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုမသိရသေးပါ၊ သို့သော်မကြာမီစွန်သည်ပိုလီနီးရှားတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အရှေ့အီစတာကျွန်းအဖြစ်သိကြသောကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါသလား။ အလားတူစွာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှတစ်ဆင့်အနောက်ဘက်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်နှင့်မြောက်အာဖရိကအထိကျယ်ပြန့်သည်။
ဥရောပတွင် ၁၆ ရာစုမတိုင်မီကစွန်ကိုနည်းလမ်း ၃ မျိုးဖြင့်မွန်ဂိုတို့၏ကျူးကျော်မှု၊ ကောင်းမွန်သောမျှော်လင့်ခြင်းကိပ်မှတဆင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်အာရပ်ကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုသိခဲ့သည်မှာ ၁၆ ရာစုမတိုင်မီကဖြစ်သည်။ ဥရောပ၏စွန်သမိုင်းကြောင်းသည်ရောမအင်ပါယာ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်နဖူးစည်းစာတန်းများအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည့် Dracos သို့မဟုတ်နဂါးပုံသဏ္windာန်လေဖမ်းစက်များဖြင့်စတင်သည်။ ဤအရာဝတ္ထုများသည်နဂါး (သို့) အခြားစိတ်ကူးယဉ်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုး၏အသွင်သဏ္ဌာန်ရှိပြီးတိုင်ထိပ်ပေါ်တွင်ချည်ထားသောဝတ်ဆင်ထားသောဆလင်ဒါပုံစံဖြင့်ကျယ်သောအိတ်များပါဝင်သည်။ လေနှင့်ပြည့်သကဲ့သို့လေပြင်းမုန်တိုင်း လာ၍ စစ်တိုက်သောအခါ၊ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရန်သူအားစစ်တိုက်ရာတွင်ကြောက်စရာဖြစ်စေရန်နှင့်လေးသမားများအားလေ၏ ဦး တည်ချက်ကိုသိရှိစေသည့်လည်ဆွဲသို့မဟုတ်ဒိုင်နိုဆောအဖြစ်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
၁၄ ရာစုအစောပိုင်းတွင်နဂါးပုံသဏ္kာန်ရှိသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကိုခေတ်ဟောင်းမှတ်တမ်းများတွင် Conrad Kieser ၏စစ်ရေးနည်းပညာ Bellefortis (၁၄၀၅) စာချုပ်သို့မဟုတ်ဗီယင်နာတွင်သိမ်းဆည်းထားသော ၁၄၃၀ တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၇ ရာစုအကုန်တွင်စွန်သည်ဥရောပတစ်ခွင်တွင်လူကြိုက်များလာသည်။ ကလေးများအားကန့်သတ်ထားသော်လည်း ၀ ါသနာတစ်ခုသို့မဟုတ်မီးရှူးမီးပန်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအလားအလာသည် ၁၈ ရာစုအထိကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ Isaac ဇာက်သည်နယူတန်၏кайтပုံစံများ၏ဂျီ ometric မေတြီရှုထောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသောစမ်းသပ်ချက်များ မှလွဲ၍ ဖြစ်သည်။ ကြယ်တံခွန်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သူနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တစ် ဦး မှာ ၁၇၅၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်မုန်တိုင်းထန်သောနေ့တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေသည့်ဘင်ဂျမင်ဖရန့်ကလင်ဖြစ်သည်။ သူသည်ကျော်ကြားသော "လျှပ်စစ်စွန်" ကိုကြိုးနှင့်တွဲထားသောသော့တစ်ချောင်းဖြင့်ကောင်းကင်သို့မြှောက်လိုက်သောအခါလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုလျှပ်စီး၏သဘောသဘာဝကိုပြသနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လျှပ်စီးလှံတံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ဤထုံးတမ်းစဉ်လာများရှိသော်လည်း ၁၉ ရာစုတိုင်အောင်မိုးလေဝသလေ့လာမှုများတွင်တူရိယာများကိုရုတ်သိမ်းရန်အတွက်စွန်များကိုပုံမှန်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဝီလျံအေအက်ဒီ (၁၈၉၁) နှင့်အယ်လ်ဟားဂရေဗေး (၁၈၉၄) တို့၏တီထွင်မှုများသည်ဤကာလမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာလေထုလေ့လာမှုတွင်သူတို့အသုံးပြုမှုကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသမားရိုးကျစွန်ကိုပြုလုပ်ထားသော stringer straged နှင့် dichedral angle ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်အမြီးမရှိဘဲပျံသန်းစေခဲ့သည်။ ဒုတိယစွန်သည်သုံးပွင့်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ချိတ်ဆက်ထားသောအဆုံးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်လေကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အခါစစ်မြေပြင်ရှိလေ့လာသူများကိုမြှင့်တင်ရန်စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စနစ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့တွင်စွန်သို့မဟုတ်ကြိုးတန်းမှသည်လေ့လာသူတစ် ဦး ၏အိမ်သို့ခြင်းတောင်းသို့ချိတ်ဆွဲထားသည့်ကြီးမားသောစွန်ရထားများပါဝင်သည်။ သူတို့ဟာအောင်မြင်မှုပိုနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ပူဖောင်းတွေကပိုပြီးထိရောက်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးသောစနစ်သည်ဗြိတိသျှရေတပ်နှင့်စစ်တပ်မှပင်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ထောင့်အတောင်။
၂၀ ရာစု၏ပထမဆယ်စုနှစ်တွင်အလက်ဇန္ဒားဂရေဟမ်ဘဲလ်သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုတီထွင်ရန်စွန်များဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကြီးမားသောကြယ်တံခွန်ဆဲလ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြယ်တံခွန်ကြီးများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင်သူသည်ဆဲလ် ၃,၃၉၃ ခုထဲမှတစ်လုံးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည် steamboat ဖြင့်ဆွဲငင်။ မြေပြင်အထက်မီတာ ၅၀ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အခြားပိုမိုကြီးမားသည့် tetrahedral တည်ဆောက်မှုများ၊ မော်တာတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်လိုချင်သောရလဒ်မရရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ၁၉၀၉ ခုနှစ်တွင်သူသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများတွင်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံရန်ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်အမေရိကန်အင်ဂျင်နီယာ Francis Rogallo သည်ရွက်ဖျင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်သိသောပုံစံအသစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးသောစွန်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ လေစွမ်းအင်နှင့်အနားကွပ်ခြောက်ခုရှိသောစနစ်၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်၎င်း၏ပုံသဏ္acquာန်ကိုရရှိခဲ့သည်။ NASA သည် Rogallo ၏စိတ်ကူးကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးအာကာသဆေးတောင့်များပြန်လည်နေရာချထားရာတွင်လေထီးအဖြစ်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ hang glider များနှင့် Two-line stunt kite များသည်ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အကျိုးဆက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒိုမင်စီ။ ဂျယ်လ်ဘတ်သည်၎င်း၏လေယာဉ်ပျံ၏အတောင်ပံကြောင့်တိကျသောအတောင်ပံများ၏လေခွင်းနိယာမများ၏အားသာချက်များအားလုံးရှိသည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောစွန် (parafoil) ကိုတီထွင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်။ လေနှင့်အတူလေအထဲသို့ဝင်သောပြည်တွင်းအိတ်များမှပုံသဏ္andာန်နှင့်လေယာဉ်ပေါ်တင်းကျပ်မှုကြောင့်၎င်းသည်တောင်ပံပုံစံကိုကြီးမားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အရှိန်မြှင့်အင်အားကိုပေးသည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာသုံး၊ လေး၊ ဝါယာကြိုးတွန်းလှည်းတွေနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွန်တွေရဲ့အားကစားနဲ့ပျော်စရာအဖြစ်လူကြိုက်များလာတယ်။
လွန်ပြီ သန့်ရှင်းသောဘုရားတပတ်အချိန်, ဘယ်မှာရှိ စွန် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောဘုရင်မကြီးဖြစ်ပြီးအဘိုးအဘွားများကမြေးများကိုသင်ကြားရန်တာဝန်ရှိသည် အိမ်လုပ်စွန်ငှက်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်.
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသတင်းစာ၊ ကျူပင်များနှင့် ပြုလုပ်၍ ဂျုံမှုန့်ဖြင့်ကပ်ထားရန်သင်ပေးခဲ့သည်။
အိမ်လုပ် prismatic စွန်အောင်လုပ်နည်း
သငျသညျစီမံကိန်းကိုဒီတနင်္ဂနွေလုပ်ချင်လျှင်။ ဒီဗီဒီယို ၅ ခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့နိုင်တယ် သူတို့က "prismatic" စွန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီရှင်းပြတယ်
Bumblebee - ကလေးများစက္ကူစွန့်
ဒါကဖြစ်ပါသည် ပျားစွန် ကဖန်တီးသည် နိုင်းလ်ဗယ်လက်
စွန်သည် A3 စာရွက်တစ်ရွက်ဖြစ်ပြီးနှစ်ဆ၊ တုတ်ချည်နှင့်အပ်ချုပ်ချည်တပ်ဆင်ထားပြီးပျံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
သင်ကတစ်ခုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် decathlon စွန် ၎င်းတို့တွင် မတူညီသော အမျိုးအစားများ ရှိသည်ကို သင်တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်ဘာလိုချင်သည်ကို သိရန် အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ဖက်မှာရှိတယ်။ အငြိမ်ဟုခေါ်သော ကြိုးတစ်ချောင်း၏ စွန်များအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို တက်၍ ထိန်းထားနိုင်ရုံမျှသာ ဖြစ်သောကြောင့် (ဒါမျိုးမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုလားသူအား ရိုးရှင်းစေရန်) ပုံဆွဲခြင်း၊ ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ သာမာန်တွေ နဲ့ မင်း အဲဒါတွေကျွန်ုပ်တို့သည် အီစတာနေ့များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့် ဆော့ကစားကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ဖြစ်ကြသည် ငါမြင်ရတဲ့ ကာယကံက pilotable စွန်လို့ခေါ်တယ်။. သူတို့မှာ ကြိုးနှစ်ချောင်းရှိလို့ ခွဲခြားရလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့ကို အားကစားစတန့်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သင်ကိန်းဂဏန်းများဖန်တီးနိုင်သည်။
ဆွဲငင်တဲ့ စွန်တွေလည်း ရှိတယ်။ ၎င်းတို့သည် ချည်ကြိုးနှစ်ခုလည်း ပါသော်လည်း ၎င်းတို့သည် လေထီးများကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်ပိုကြီးပြီး မတူညီသော အားကစားအတွက် အသုံးပြုကြသည်၊ လေ၏တွန်းအားကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆွဲယူရန်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဆွဲငင်အားပြုကြသည်။
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်တို့သည်လေနှင့်လေအကြောင်းကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဒါမမှန်ဘူး အပေါ် Read